Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Honolulu mankany Sydney: Fomba vaovao hanidinana ny Hawaiian Airlines
Airbus A330 an'ny Hawaiian Airlines
Nanamarina ny Hawaiian Airlines fa hanohy ny serivisy diminy isan-kerinandro eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina Sydney Kingsford Smith (SYD) any Australia sy ny seranam-piaramanidina iraisampirenen'ny Daniel K. Inouye (HNL) any Honolulu, manomboka ny 13 Des. Hawaiian, izay nampiato ny lalana tamin'ny volana martsa 2020 noho ny amin'ny fameperana fitsangatsanganana napetraka tamin'ny fiandohan'ny areti-mifindra, dia handray ny Aostraliana hiverina any amin'ireo nosy miaraka amin'ny fiaraha-miasa Hawaiiana sonia amin'ny fotoana fialan-tsasatra.
"Faly izahay fa mampifandray indray an'i Hawai'i sy Australia ary namporisika ny valintenin'ny vahoaka tamin'ny fandaharan'asan'ny vaksiny nasionaly Aostraliana, ahafahana manokatra indray ny sisintany," hoy i Andrew Stanbury, talem-paritry ny Aostralia sy Nouvelle Zélande ao amin'ny Hawaiian Airlines.
“I Hawaii dia toerana fialan-tsasatra malaza be ho an'ny Aostraliana, ary fantatray fa maro ny olona no niandry fatratra ny hanao vakansy Hawaiiana. Tsy andrinay ny handray soa aman-tsara ireo vahiny ao an-tsambo mba hankafy ny fandraisana vahiny tena fantatray fa tian'ny vahiny ary tsy hitanay, ”hoy izy.
HA451 dia hanohy ny 13 Desambra amin'ny fiaingana HNL ny alatsinainy sy alarobia ka hatramin'ny asabotsy amin'ny 11:50 maraina ary tonga ao SYD tokony ho amin'ny 7:45 hariva ny ampitso. Manomboka ny 15 Desambra, ny HA452 dia hiainga ao SYD ny Talata sy Alakamisy ka hatramin'ny Alahady amin'ny 9:40 alina miaraka amin'ny 10:35 maraina voalahatra ho tonga ao amin'ny HNL, ahafahan'ny vahiny miditra ao amin'ny trano fonenany ary manomboka mikaroka an'i O'ahu, na mifandray amin'ny rehetra. ny toeran'ireo firenena mpifanila vodirindrina efatra ao Hawaii.
Ny governoran'i David David Ige tamin'ny herinandro lasa teo dia nandray tsara ireo mpitsidika niverina nanomboka ny 1 Novambra lasa teo satria ny ezaka ara-pahasalamana ho an'ny daholobe dia nahatonga ny tahan'ny COVID ambany indrindra any Etazonia. Ny Hawaiian Airlines tamin'ny volana lasa teo dia namoaka a horonan-tsary vaovao ao anaty sidina mamporisika ny mpitsidika ny Travel Pono (tompon'andraikitra) amin'ny fankafizana an'i Hawai'i soa aman-tsara.
Ho fanampin'ny sidina mety tsy miato mankany Hawaii, ireo mpitsangatsangana aostralianina manidina amin'ny Hawaiian Airlines dia mahazo indray ny fidirana amin'ny tambajotran-trano amerikana marobe an'ny mpitatitra, mamela azy ireo hanohy am-pilaminana ny diany mankany amin'ny vavahady 16 an'ny tanibe amerikana - ao anatin'izany ny toerana vaovao any Austin, Orlando, ary Ontario, Kalifornia - miaraka amin'ny safidy hankafy fijanonana any amin'ny Nosy Hawaiian.
Hanohy hampiasa ny zotra SYD-HNL ny Hawaiian miaraka amin'ny fiaramanidina Airbus A278 lehibe misy seza 330, izay misy seza hoditra 18 Premium Cabin lie-flat, 68 amin'ireo seza Extra Comfort malaza ary seza 192 Main Cabin.
Amin'izao fotoana izao, ny olom-pirenena Aostraliana sy ny mponina maharitra miverina ary ny fianakaviany akaiky ihany no mahazo miditra any Aostralia tsy misy manamarina. Na dia mbola hambara aza ny fepetra takiana amin'ny fidirana ho an'ny fanjakan'i Hawai'i, manantena ny Hawaiian fa hampifanaraka ny fepetra takian'izy ireo amin'ny fitsipiky ny governemanta amerikana izay mitaky ny fahatongavan'ireo iraisam-pirenena hanehoana porofo momba ny vaksiny sy ny fitsapana COVID-19 ratsy natao tao anatin'ny telo andro niaingana ny fanjakan'i Hawai'i. mahomby 8 Novambra.
Mitohy mivoatra ny lalàna iraisam-pirenena ary ampirisihina ireo mpandeha hivoatra hatrany amin'ny alàlan'ny fantsom-panjakana raha miomana amin'ny diany izy ireo.
Nanomboka ny serivisy SYD-HNL ny Hawaiian tamin'ny Mey 2004 ary nitazona ny toerany ho mpitatitra toerana voalohany amin'ny dia mankany Hawaiʻi amin'ny alàlan'ny New South Wales. Miato kely ny serivisy intelo isa-kerinandro ataon'ny mpitatitra eo amin'ny HNL sy ny seranam-piaramanidina Brisbane (BNE), izay natomboka tamin'ny Novambra 2012.
Visit www.HawaiianAirlines.com hijerena ny fandaharam-potoanan'ny sidina sy hividianana tapakila.